Tsika PB2000V-PB6000V Inodziya mhando block block yekugadzira muchina Mugadziri uye Mutengesi | Dongshen
EPS Block richigadzirisa Machine
Mhepo Kutonhora Block richigadzirisa Machine
Vacuum Block richigadzirisa Machine
Adjustable Block richigadzirisa Machine
Rakaumbwa richigadzirisa Machine pamwe Vacuum
Energy Kuchengetedza Rudzi Rakaumbwa Rakaumbwa Machine
Central Vacuum Sisitimu
EPS Kucheka Muchina
EPS Sheet Kucheka Muchina
Eps Muchina-Eps Router
EPS Mould uye zvishongedzo
EPS Raw Material Chirongwa
EPS Raw Zvishandiso Zvishandiso
SPY90-SPY120 Inoenderera Pre ...
PB2000V-PB6000V Vacuum mhando ...
PB2000A-PB6000A Mhepo inotonhora ...
PB2000V-PB6000V Vacuum mhando block block kuumba muchina
EPS Vacuum Block richigadzirisa Machine iri vakarongeka EPS muchina kuti EPS kutigumbura. EPS matombo anogona kutemwa kuti machira imba kuputira kana kurongedza. Zvigadzirwa zvakakurumbira zvakagadzirwa kubva kumashizha ePSS sandwich mapaneru, 3D mapaneru, emukati uye ekunze madziro ekuputira emadziro, kurongedza kwegirazi, fenicha kurongedza nezvimwe.
EPS Vacuum block yekuumba muchina inogona kuburitsa yakakwira density EPS matombo, kushanda mukukurumidza kutenderera, uye mabhuroko ese akatwasuka uye akasimba uye neakadzika mvura mwando. Muchina wacho unogona zvakare kugadzira yakadzika diki mabhuroko nehunhu hwakanaka. Inogona kuita kukwirira kwakanyanya pa40g / l uye yakaderera density pa4g / l.
EPS Vacuum Block richigadzirisa Machine wakakwana huru muchina muviri, kudzora bhokisi, Vacuum hurongwa, yairema maitiro etc.
EPS Block richigadzirisa Machine zvakwakanakira
1.Machine yakaitwa yepamusoro-simba mativi machubhu uye gobvu simbi mahwendefa;
2.Machine inoshandisa 5mm gobvu aluminium steam mahwendefa neTeflon kupfeka. Uye pasi pearuminiyamu ndiro, hukuru hwakakura hwakatsigirwa pahuwandu hwakawanda hwakaiswa kudzivirira aluminium ndiro deform pasi pekumanikidza kukuru. Aluminium mahwendefa haachinje fomu mushure memakore gumi achishanda;
3.Machine ese matanhatu mapaneru ari kuburikidza nekupisa kurapwa kuburitsa kutenderera kushushikana, kuitira kuti mapaneru asakwanise kuora pasi pekupisa kwakanyanya
4.Machine ane akawanda emhepo mitsara kuverengera kupisa kunyange mumablock, saka block fusion iri nani;
5.Machine mahwendefa ane zvirinani abudise system saka mabhuroko akaomeswa uye anogona kutemwa munguva pfupi nguva;
6.All muchina mahwendefa kuburikidza ngura kubvisa, bhora spraying, wozoita anti-ngura base kupenda uye pamusoro kupenda, saka muchina muviri hausi nyore kuwana ngura;
7.Machine shandisa smart pombi system uye yekupisa maitiro, kuona yakanaka fusion yemablock zvese kune yakakwira density uye yakaderera density;
8.Fast yekuzadza system uye inoshanda yevhavha sisitimu inosimbisa muchina nekukurumidza kushanda, yega yega block 4 ~ 8 maminetsi;
9.Ejection inodzorwa ne hydraulic pombi, saka ese ejectors kusunda uye kudzoka panguva imwecheteyo kumhanya;
Zvizhinji zvezvinhu zvinoshandiswa mumushini zvinotengeswa kunze kana zvigadzirwa zvine mukurumbira.
Mould Mhango Kukura
Kg / kutenderera
m³ / kutenderera
Vacuum Kutonhora Mvura
Pasi Steam Vent
Unyanzvi 15kg / m³
Min / kutenderera
Unganidza Mutoro / Simba
Pashure: PB2000A-PB6000A Mhepo inotonhorera mhando block block yekuumba muchina
Zvadaro: SPY90-SPY120 Inoenderera Pre expander
PB2000A-PB6000A Mhepo inotonhora mhando block block ...
SPB2000A-SPB6000A EPS Adjustable Type Block Mol ...
Adress: Kamuri 1407-1408, No.19 Jinping Road, Fuchun Street, Fuyang Dunhu, Hangzhou, Zhejiang Province, China 311402